Ngokuvamile siyazibuza ukuthi ukwenza iso twitches? Lesi sifo libizwa hyperkinesia noma ehlukile, tic. Ngokuvamile-ke kwenzeka ngokuzumayo, kukhona, futhi kungase kudlule masinyane, futhi ingahlala izinsuku eziningana. Ezimweni ezimbi kakhulu lo muntu angase abe nomuzwa nokukukhuluma.
Teak kwenzeka ngenxa yamaphutha izikhungo umsebenzi zobuchopho banesibopho inhlangano tenhlangano ukulawulwa kwemisipha ithoni. Tshwaya kungenxa okungalindelekile imisipha Kufinyeta, etholakala eduze iso futhi umphumela emsipheni ekucindezelekeni. Teak kungaba uphawu CNS izifo, ukuqina kwemithambo yegazi, futhi ngenxa yezinkinga kuhlasimulise nokulimala engqondweni.
Tic akuyona kuphela ubudala, kodwa imisipha ubuso. Esikhathini esiyiminyaka wobuthongo, uyanyamalala, futhi amagagasi kungenziwa iyakhula. Lesitshalo imikhaza impela eningi, kodwa indlela bokuphila ukuthi sihlezi core sawo siyafana: uyisifushaniso emfushane okungalindelekile ka umsipha noma iqembu imisipha, ngenxa ukusebenza kanyekanye.
Ilokhu ukunyakazisa amehlo yini okufanele uyenze? Uma une-iso ukudikiza njalo, kuyoba engcono uxhumane isazi sezinzwa. Izidakamizwa asetshenziswe yilesi sifo, okuhloswe ngaso ekubuyiseleni ukusebenza evamile isimiso sezinzwa. Ngaphandle kwezidakamizwa udokotela angakunika umuthi wena yimuphi Physiotherapy, massage. Uma umkhaza akuvamile, hhayi isikhathi eside, kungenzeka ukuze anqobe le nkinga ejenti izifo.
Kungani ukunyakazisa iso? Izimbangela a tic kwemizwa kungaba ngezindlela ezihlukahlukene. Kungenzeka ukucindezeleka, ukudangala, isigqi okukhulu komsebenzi, ukukhathala, nokungalali, nobuthakathaka umzimba ngemva kokuba ukugula (lekufaka leto letitsatfwe idluliselwe ingane) kanye nemisebenzi. Ngaphezu kwalokho kungaba ngoba yofuzo ye-umzimba.
Futhi, umzimba kungenzeka ukuthi awunayo i-magnesium eyanele, ngoba kunciphisa excitability sezinzwa. Gcwalisa kungaba ehlukahlukene etafuleni lakho -ukudla magnesium, ezinye zazo yilezi: izinhlanzi, i-rye isinkwa, currants abamnyama, aluhlaza okwesibhakabhaka, cherry, uphizi, ubhontshisi, amantongomane, ubhanana, amakhabe, kanye ushokoledi.
Isizathu kungase kube ukuntuleka vitamin, okuyinto kuphakama ngokuqondene nokuza entwasahlobo.
Eye twitches okwakufanele akwenze:
1) Okokuqala, kumelwe sizame ukubona imbangela impande yilesi sifo futhi ukuqeda ukucindezeleka ezaholela ukuvela yayo.
2) phumula, kuhlanganise phakathi nemini ngokushikashikeka nokukhandleka. Uma bungehli ubuthongo, kubalulekile noma nini uma kungenzeka ukuvala amehlo akho, asonge izandla kusofa, njalo ahlale cishe imizuzu engu-15.
3) kubalulekile ukuzola, uma kungenjalo, khona-ke ungakwazi uphuze iconsi tincture valerian, motherwort kanye hawthorn, kanye decoction of chamomile. Uma lezi sedatives musa asize, kungcono uye kudokotela uyofuna icebiso.
4) zisebenzisa iziphuzo kancane caffeine: itiye, ikhofi.
5) abeke cindezela usebenzisa Shredded eshiya geranium.
6) uzame ukwehlisa sinqotshwe ukuphatheka kabi ubuncane.
7) ukwenza kamuva ekuphileni kwabo njengoba imizwa kahle kakhulu ngangokunokwenzeka: hamba ku yeshashalazi, amakilabhu uyohlangana nabantu mnandi kuwe, wenze noma yini ayithandayo.
8) ukuze sigweme noma ikuphi ukonakaliswa phezu iso, njenge: emoyeni, abandayo ingress amanzi, njll
9) ukushintsha imodi osuku lwabo ukusebenza.
10) bachithe isikhathi esincane kukhompyutha naku-TV.
11) Ngokuvamile bazama ukuthonya blink umzuzu, kungasiza.
12) eduze emehlweni umzamo, ngidonsa umoya, ngaleso sikhathi exhale, bese uvule amehlo akho. Futhi ngakho izikhathi 5. Futhi ngemuva kwesikhathi esithile, ekusebenziseni kufanele liphindwe.
Ngakho, lo mbuzo: "yini okufanele uyenze iso twitches," ngaphambi akazange ame, kubalulekile ukunciphisa nezimo ezicindezelayo ekuphileni esiphansi, wenze ukuphila kwakho kube ihlukahluke futhi kuqashwe impilo yabo.
Indlela asuse isimila emehlweni akhe amakhambi ekhaya?
Kanjani ukwenza deflector ushimula ngezandla zakhe?
Kampanula Ebukekayo: ukunakekelwa ekhaya
11 amathiphu saqala inyama
Medicine 'ersefuril'. imfundo